Madaxweyne Shariif oo Maanta amray in Dib loo celiyo hantidii ay lahaayeen Ganacsatadii ugu waa weyneyd Dalka Somaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowlada KMG ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmad oo maanta xafiiskiisa Degreeto kasoo baxday nuqul kamid ah ay Heshay Shabakada Badweyn.com ayaa lagu amray in dib loo celiyo dhaxaltooyada marxuumiinta kala ah S/guuto Salaad Gabeeyre Kediye, Marxuum S/guuto Maxamed Ceynaanshe Guuleed iyo C/qaadir Dheel.
Dikreetada Xafiiska Madaxweynaha kasoo baxay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha markuu arkay xerka Lr. ee soo baxay 10/09/1970 iyo kuwo kale oo ka soo hor jeeday xuquuqul insaanka laguna baabi’yay dastuurka, Waxa uu madaxweynuhu ammar ku bixiyay in loo celiyo dhaxaltooyada hantidii ay lahaayeen Marxuumiintaasi.
Sidoo kale Dekreetada ayaa lagu xusay in laga billaabo maanta oo ay taariiqdu tahay 17/06/2012 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ammar ku bixiyay in loo celiyo hantidii maguurtada aheyd oo ay xukuumaddii meleteriga aheyd kala wareegtay marxuumiinta kala ah S/guuto Salaad Gabeeyre Kediye, marxuum S/guuto Maxamed Ceynaanshe Guuleed iyo C/qaadir.
Hantidaasi ma guurtada ah ayaa dikreetada lagu sheegay in ay isugu jirto dhulal bannaan iyo dhismooyin ay hore u lahaayeen Sadexda marxuum kuwaas oo ku kala yaal duleedka iyo gudaha gobolka banaadir.
Waxaana xeerka lagu amray dadka heysta dhulalkaasi ama dhismooyinkaasi in ay did ugu soo celiyaan dhaxaltooyada marxuumiinta S/guuto Salaad Gabeeyre Kediye, marxuum S/guuto Maxamed Ceynaanshe Guuleed iyo C/qaadir Dheel.
Sidoo kale isla xeerkan ayaa dib loogu soo celiyay magacyada iyo maamuuski ay ku lahaayeen shacabka iyo Ciidanka XDS, maadaama ay kaalin wax ku ool ah ka soo qaateen dhismaha iyo abaabulka lagu aas aasay ciidamada XDS.
Dekreetadan ayaa waxaa ku saxiixnaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sida ku cadna waxa uu dhaqangelayaa maanta oo taartiikhdu tahay 17/06/2012.